က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး | Samfunnskunnskap.no
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်န္းမာေရးအတြက္ မည္သူ႔တြင္ ထာဝန္႐ွိသနည္း ?
ယခင်က လူနာများ၏ကျန်းမာရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဌာနတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟု ထင်ကြလေ့ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းကစတင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သာလျှင် တာဝန်ကြီးကြီးရှိကြသည်ဟု ပြောင်းလဲစဉ်းစားလာကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်စားသောက်ပုံက ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန(Helsevesenet)တွင် အကြံဉာဏ်နှင့် လမ်းညွှန်မှုများကိုပေးရန် တာဝန်ရှိသော်လည်း ထိုအကြံဉာဏ်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသနည်းအမျိုးမျိုးအတွက် သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်တွင်ရရှိနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များအပြင် ဥပမာအားဖြင့် ဆရာဝန်ထံမှ နှင့်ဆေးဆိုင်များမှ လက်ကမ်းစာစောင်များ ရယူသည့်နည်းများလည်း ရှိပါသေးသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးမှု(opplysning)နှင့် သင်ကြားပြသမှု(opplæring) အများအပြားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကျောင်းတွင် ကျန်းမာရေးသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်က အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးပညာပေးစည်းရုံးမှုများကို ဆောင်ရွက်နေသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ရေဒီယိုကလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာများကို များစွာ ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိသည်။
လူမှုဝန်ထမ်းနိုင်ငံတော်ကြီးက ပြည်သူအားလုံး ကျန်မာရေးကောင်းစေရန် ကြီးမားသောတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပေးနေသော်လည်း နေရာအတော်များများတွင် လူတိုင်းက မိမိကျန်းမာရေးအတွက် မိမိမည်သို့ ဂရုတစိုက်နေထိုင်မည် ဟူသည့်အချက်ပေါ်မူတည်ကာ မိမိကိုယ်မိမိတာဝန်ယူရန်လည်းလိုသေးသည်။ နိုင်ငံအတော်များများတွင် ဆရာဝန်က ဆေးကုသမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် တဦးတည်းသောအာဏာပိုင်သကဲ့သို့ ကျင့်ကြံပြုမူသည်ကို လူနာများကြုံရလေ့ရှိသည်။ မည်သည့်ဆေးမျှမရဘဲ ဆရာဝန်ထံမှ ပြန်ခဲ့ရသည်ကိုလည်း မည်သည့်အခါကမျှ ကြုံဖူးကြမည်မဟုတ်ပါ။ နော်ဝေနိုင်ငံတွင်မူ ကုသမှုနှင့် ဆက်လက်စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို လူနာနှင့်ဆရာဝန်တို့ တိုင်ပင်ရေးဆွဲလေ့ရှိကြသည်။
က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္း – နာဖ်ား၍အလုပ္ပ်က္ျခင္းထက္ ပိုေကာင္းမည္ေလာ ?
အခ်ဳိ႕က က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အနာေရာဂါကင္း႐ွင္းျခင္းဟုဆိုၾကသည္။ အျခားသူမ်ားက အဆင္ေျပၿပီး ကုိယ့္ဘဝကိုယ္ ေပ်ာ္ပိုက္သည္ကို က်န္းမာေရးေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။
က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည့္ ဤနည္း ၂ မ်ဳိးလံုး မွန္ပါသည္။ ဆိုး႐ြားေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပထမဖြင့္ဆိုခ်က္က အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အနာေရာဂါအမ်ားစုအတြက္ ေဆးဝါးရႏိုင္ၿပီး အေရးေပၚလိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမႈကိုရႏိုင္သည့္ အျခားျပည္သူမ်ားအတြက္မူ အမ်ားသေဘာထားအရ က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ကိုယ္ႏွင့္စိတ္က်န္းမားေနသည္ထက္ ပိုရမည္ဟု သေဘာထားၾကပါလိမ့္မည္။
လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္တခုတြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး တတ္ႏိုင္သမွ် ေကာင္းမြန္လွေသာ လူေနမႈဘဝမ်ဳိးတြင္ ေနႏိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။
လူမႈဝန္ထမ္းႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူတိုင္း မိမိ၏စီးပြားေရးအေျခအေနေပၚမူမတည္ဘဲ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးႁပႈႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ လိုအပ္ေသာကုသမႈကို အားလံုးရေစရန္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤကိစၥမ်ားကို အာမခံႏိုင္ေစရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႔႐ွိႏိုင္သည္။
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္း ႏႈတ္ေစာင့္စည္းရန္ ဝတၱရား႐ွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎တို႔အေနႏွင့္ လူနာ၏အသိအမွတ္ႁပႈမႈမရဘဲ လူနာ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ေျပာခြင့္မ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။